တညင်းသီး နဲ့ ကျန်းမာရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » တညင်းသီး နဲ့ ကျန်းမာရေး
တညင်းသီး နဲ့ ကျန်းမာရေး
Posted by ခင္ခ on Jul 24, 2012 in Health & Fitness | 25 comments
အခုလိုရာသီမှာ တညင်းသီးပြုတ်တွေရောင်းကြတာများသလို စားတဲ့သူတွေလည်းမနည်း ရှိကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီတညင်းသီးဟာ ကျန်းမာရေးကို အကျိုးဖြစ်စေဖို့ထက် အဆိပ်သင့်အစာလို့ခေါ်ရလောက်အောင် ဆိုးကျိုးတွေရှိတဲ့အကြောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီစာပေစုထဲက ကောက်နုတ်တင်ပြပါရစေ။
တညင်းသီးဟာ အဆိပ်တက်တဲ့အစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ သူအထဲမှာ Djenkolic acid လို့ခေါ်တဲ့အဆိပ်ပါဝင်ပြီး ကျောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်၊ အဲဒီအဆိပ်ရဲ့ မော်လီကျူးတွေဟာ အပ်ချောင်းပုံလေးတွေဟာ ပုတီးကိုသီထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်၊ ကျောက်ကပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယိထဲက အညစ်အကြေးတွေကို စွန့်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်၊ တညင်းသီးစားလိုက်ရင် ပါဝင်တဲ့ Djenkolic acid အဆိပ်တွေဟာ သွေးထဲကိုအရင် ရောက်ပါတယ် ၊ပြီးမှ အသည်းကို ရောက်ပါတယ်၊ အဆိပ်တွေဝင်လာရင် ပြယ်အောင်လုပ်ပေးတာ အသည်းကဖြစ်ပေမဲ့ တညင်းသီးမှာပါတဲ့ အဆိပ်ကိုတော့ အသည်းကမဖျက်စီးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံးကျောက်ကပ်ကနေစွန့်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခုန အပ်ချောင်းပုံ အဆိပ်လေးတွေက ကျောက်ကပ်ရဲ့ glomerulus နဲ့ tubule လို့ခေါ်တဲ့ ဆီးပြွန်ငယ်လေးတွေမှာ ပိတ်ဆို့ပါတယ်၊ အပ်ချောင်းပုံလေးတွေကထိုးလို့ သွေးကြောလေးတွေပေါက်ပြီး သွေးထွက်နိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါဆို ဆီးသွားတဲ့အခါ သွေးပါလာတတ်ပါတယ်၊ ပိုဆိုးရင် ဆီးသွားလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ရင် ဆီးသွားနည်းလာမယ် နောက်ဆုံး ဆီးမသွား နိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါကျောက်ကပ်နှစ်ခုလုံး ဆီးမသွားနိုင်လို့တင်းပြီး မခံရပ်နိုင်အောင်နာကျင်လာပါမယ်၊ ဒါဆိုဆေးရုံကိုအချိန်မှီ သွားပြီး ကျောက်ကပ်သန့်စင်စက်နဲ့ အချိန်မှီကုသရပါလိမ့်မယ်။
တညင်းသီးမှာ amino acid လို့ခေါ်တဲ့ Protein ဓာတ်တွေပါတာကြောင့် စွဲမက်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက တညင်းသီးစားရတဲ့အရသာဟာ အသားစားရတဲ့အရသာကဲ့သို့ ဖြစ်စေတာပါ၊ နောက်ပြီး Managanese တွေများစွာပါလို့ သကြားဓာတ်ကို ကျစေနိုင်ပါတယ်၊ ဗီတာမင်အနေနဲ့တော့ တညင်းသီးမှာပါတာမတွေ့ရပါဘူး၊ဒါကြောင့် တညင်းသီးဟာ အဟာရဓာတ်ရဖို့အတွက်တော့ မစားသင့်ပါဘူး။
တညင်းသီးအဆိပ်ဟာ ၃၀ဝ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ကျော်မှသာ ဓာတ်ပြယ်စေနိုင်တာမို့ ရေဆူမှတ်ဟာ ၁၀ဝ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သာရှိတာမို့ ဘယ်လိုမှဓာတ် မပြယ်နိုင်ပါ၊ ဒါကြောင့်ပြုတ်မယ်ဆို ရေကိုတစ်ကြိမ်တည်းပြုတ်တာထက် မကြာခဏလဲပြီးသွန်ပေး ရေအသစ်ထဲ့၍ပြုတ်သင့်ပါတယ်၊ ဒါမှ အဆိပ်အားလုံး မဟုတ်တောင် လျော့နည်းသွားအောင်လို့ပါ၊ ကင်စား၊မီးဖုတ်စားရင်တော့ အဆိပ်တွေဟာဓာတ်လည်မပြယ်၊ အပြင်လည်းမထွက်၊ လျော့လဲမသွားဘဲ ရှိနေတာပါ၊ တစ်ချို့လည်းဆားရေစိမ်ပြီးစားကြပါတယ်၊ ဆားရေမှာကြာကြာစိမ်ထားရင်တော့ ဆားရေပြင်းအားများလေ အဆိပ်တွေ လျော့နည်းလေဖြစ်မှာပါ၊ သိပံ္ပနည်းအရ pH များလေလေ ပျော်ဝင်မှု့ Solubility များလေသဘောပါဘဲ၊ပြီးတော့ တညင်းသီးနုစဉ်မှာ အဆိပ်ပါဝင်မှု့နည်းတာတွေ့ရပါတယ်။
တညင်းသီးစားရင်ပါးစပ် အနံထွက်တယ်ဆိုတာ Djenkolic acid မှာပါတဲ့ ဆာလ်ဖါအုပ်စု SH နဲ့ အခြားဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ဓာတ်ပြုရာကထွက်လာတာပါ၊ အဲဒီထွက်လာတဲ့ဓာတ်တွေကို အဆုတ်ကနေစွန့်ထုတ်တဲ့အတွက် အသက်ရှုထုတ်တဲ့အခါ အနံရစေတာဖြစ်ပါတယ်၊ပြီးတော့ဆီးမှာလည်းအဲဒီဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့အတွက် ဆီးသွားရင်လဲအနံထွက်စေတာဖြစ်ပါတယ်၊တစ်ချို့ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးမှာ တညင်းသီးဟာ သကြားဓာတ်ကိုလျော့စေလို့ တညင်းသီး စားရင်ဆီးချိုသက်သာစေတယ်လို့ ဆီးချိုရောဂါကုသရာမှာသုံးတတ်ကြပါတယ်။
တညင်းသီးအဆိပ်ဟာ ဆီးထဲမှာအနည်ကျတဲ့အတွက် ဆီးကျောက်တည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့် တညင်းသီးအစားများရင် ဆီးကျောက်တည် ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလို ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ တညင်းသီးကို မနေနိုင်လို့စားရင် တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက်တာ စားသင့်ပြီး မစားဘဲနေနိုင်ရင်ကောင်းပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
တညင်းသီး သိပ်မကြိုက်လို့ တော်သေးတယ် … အဟီး …. ။
တညင်းသီးရဲ့ ဆိုက်အဖက်ဒ်တွေကို ပြောပြပေးလို့ ဗဟုသုတရပါတယ် ကိုခင်ခရေ
မစားတာကောင်းပါတယ် အထက်နံ အောက်နံ တစ်ကိုယ်လုံးနံ ပါသဘိနဲ့
ကျုပ် အသိတယောက်ဆို ဆီးမသွားနိုင်လို့ အောင့်ပြီး အော်နေရတယ်
ဒါနဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီး ပြွန်တောက်လျောက် အချောင်းငယ် တချောင်းနဲ့
သူ့ခမျာလဲ နာလွန်းတယ်ထင်ရဲ့ အသံဗြဲကြီးနဲ့ အော်နေရသကွယ့်
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့တိုးမယ်စိုးလို့ အဲဒီကတည်းက ဒညင်းသီး ဆို
ဒညင်းသီးကတော ့အသေကြိုက် သို ့သော်
အိမ်သာဆေးရတဲ့သူတွေကိုအားနာစိတ်ဝင်လာကတည်း မစားတာကြာပေါ ့
တညင်းသီးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ….
တညင်းသီးစားလွန်းလို့ ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာလဲ သိပေမယ့် ….
မရှောင်နိုင်တော့ စားမိတယ် … စားပီးရင် တော့ ဆေးသောက်တယ်ပေါ့နော် …
အဲလိုမျိုး စားလိုက်ဆေးသောက်လိုက်နဲ့ ပြုလုပ်မှုတွေကြာလာရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာသိရင် ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်…
တညင်းသီး မရှောင်နိုင်သူ ……
သေချာတာတော့ ဆေးဖိုး ပိုက်ဆံ အပိုကုန်တာပါပဲ … အစ်မရေ .. ဟီးဟီး … ။
ဒါပေမဲ့ ကြိုက်တတ်တဲ့ အချို၊အဆိမ့်
ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အစားအစာ တွေပါနော်…
မရှောင်နိုင်ခဲ့ရင် ဓညင်းသီးကို နူးအောင်ပြုတ်ရင် အဆိပ်အတောက်သက်သာစေပါတယ်…၊
ဓညင်းသီး စားတဲ့နေ့ ကဇွန်းရွက် များများစားပေးဖို့ သင့်ပါတယ်…၊
အမှန်တော့ ဓညင်းသီးကရတဲ့ အဆိပ်ရယ် ဆေးကဖြစ်လာတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရယ်တွေနဲ့
စားတဲ့သူအဖို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေစေနိုင်ပါဘူး….၊
ကြိုက်ရင်လဲ အတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့စားတာ အကောင်းဆုံးပါခင်ဗျား…။
ပြုတ်တဲ့အခါ ရေဆူလိုက်၊လဲပြီးထပ်တည်လိုက် လုပ်ပေးဖို့ ထပ်ပြီးအသိပေးပါရစေ၊ ရေတစ်ကြိမ်ထဲနဲ့တော့ အဆိပ်အတောက်မသက်သာကြောင်းပိုစ့်မှာရေးထားပါတယ်၊
မုန်လာဥနီ၊ပန်းသီး၊တရုတ်ဆီးသီး၊မက်မွန်သီး၊ဆီးသီး၊နာနတ်သီး၊စပျစ်သီး၊ထောပတ်သီး၊ပန်းဂေါ်ဖီ၊ပဲသီးစိမ်း၊ ပဲနီလေး၊ ပဲခြောက်၊ငါး၊ဒိန်ချဉ်၊အဆီပါဝင်မှု့နည်းတဲ့နို့ စသာတွေစားသင့်ပြီး၊ အသားစားခြင်းနဲ့ အုန်နို့ပါတဲ့အစာတွေ လျော့စားသင့်ပါတယ်၊ ဝမ်ချုပ်ခြင်းဟာလည်း သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းကို အားပေးပါခြင်းကြောင့် ရေများများသောက်သင့်ပါတယ် လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်၊
FAME ကထုတ်တဲ့ သည်းခြေကျောက်ပျော်ဆေးက သက်သာတယ်လို့တော့ သောက်တဲ့သူတွေဆီက သိရပါတယ်၊သည်ခြေမှာကျောက်တည်ရင် အဓိကမတည့်တဲ့အစာက ဝက်သား၊ကြက်သွန်နီဥ၊ဥအမျိူးနဲ့ ရနံမွေးပါတဲ့ အိနိ္ဒယအစားအသောက်တွေ(ဥပမာ-ချစ်တီးဟင်းတွေနဲ့ဒါန်ပေါက်)ဖြစ်တယ်တဲ့။
သွေးစစ် ဆီးစစ် ဆေးမျိုးစုံသောက်လိုက်တာ
ဒူးနာလာလို့ ဓါတ်မှန်ရိုက် ဟိုဆေးလျှော့
ခုတော့ FAME ကထုတ်တဲ့ ဆေးသောက်နေပါတယ်…
စားရန် ရှောင်ရန် အစားတွေ ညွှန်ပေးထားလို့
ဒီကနေ ့က စပြီး
စကားမစပ် မန်းတလေး ဒေါ်စိန်ကြီး အသုပ်ဆိုင်က ဒိန်ညင်းသီးသုပ် က တော်တော် စားကောင်းတာကလား
ကိုပေရေ ဒေါ်စိန်ကြီးအသုတ်ဆိုင်မှာ ထမင်းသုတ်တော့စားဖူးတယ်၊ တညင်းသီးသုတ်တော့ မစားဖူးဘူး။
ကိုခင်ခရေ တညင်းသီးကို အဝင်အထွက်နံတာကြောင့်မစားဖြစ်ပါဘူး နောက်တစ်ခုက သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုး ကျိုးကိုကြည့်တော့ ဆိုးကျိုးများတာကြောင့် မစားဖြစ်တာလဲပါပါတယ် .. အခုလိုအသေးစိတ်လေး ဆိုးကျိုး တွေတင်ပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ……..
ဒါပေမယ့် လက်ဖက်သုပ်ထဲမှာတော့တစ်ခါ တစ်ခါ ထည့်စားဖြစ်တယ်
နဂိုကတော့အရမ်းစားပါတယ် ခုနောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးကမကောင်းတော့ ကျောက်ကပ်ရောဂါလည်းကိုယ့်မှာရှိတော့ မစားတာတော်တော်တောင်ကြာသွားပါပြီ ခုလိုဗဟုသုတရဖွယ် ကျန်းမာရေး ပညာလေးတွေ ဝေမျှပေးတဲ့ကိုခင်ခကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။။။
အီးး … ကိုခင်ခရေ ခက်တော့နေပါပြီ
ငုံတို့က ကချင်ပြည်နယ်သူတွေဆိုတော့ တညင်းသီးကို ဝက်သားနဲ့ချက်ပြီး ထမင်းနဲ့စားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး
အလုံး 100 – 200 ကို အိုးထဲထည့်ပြုတ်ပြီး ကျက်တာနဲ့ ဆားနဲ့ဆီခွက်ချပြီး ဒီအတိုင်း ထိုင်စားကြတာ
နံလည်း တအိမ်လုံးနံပဲ ၊ တစ်လုံး နှစ်လုံးစားပြီးတော့ ပါးစပ်အနံအခံနိုင်ဘူး နံမယ့်တူတူ ဝအောင်စားမယ် ဆိုပြီး တဝတပြဲ စားကြတာ အင်း ခုထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်… နောက်မှ စုပြီးဖြစ်မလားတော့ မပြောတတ်ဘူး … တညင်းသီးက ကောင်းကျိုးမပေးမှန်းသိပေမယ့် ခုလောက်တော့ အသေးစိတ်မသိဘူး … အင်း ……. ခုတော့ လျှော့စားရတော့မှာပေါ့နော် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုခင်ခရေ…
ကျွန်တော်တို့လို ၄ဝကျော်တွေက ဟိုနားကနာလိုက် ဒီနားကအောင့်လိုက်နဲ့ဖြစ်လာပြီမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့စာပေတွေ၊ စာအုပ်တွေပိုပြီးဖတ်ဖြစ်လာပါတယ်၊ ကိုယ်အဲလိုဖတ်ဖြစ်လို့ သိတာလေးတွေ စိတ်ဝင်စားဖတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်း သိရအောင်ရေးတင်ပေးတာပါ၊ ပြီးတော့ မစနိုးတို့လို စာအရေးလည်းမကောင်း ဘာရေးရမှန်းလည်းမသိ ပိုစ့်ကလည်းရေးချင်တာနဲ့ ကိုယ်ဖတ်ဖူးတဲ့ထဲကဘဲ ပြန်ရေးနေမိတာပါ။
မနှင်းဆီရေ။ ဟုတ်ပါတယ်ကချင်ဖက်ကတော့ တညင်းသီးကလည်းကောင်း ပေါလည်းပေါဆိုတော့ အဲလိုစားကြတာကြားဖူးပါတယ်၊ တညင်းသီးအဝစားပြီး ရေများများသောက်လို့ဘဲ အကြံပေး ရတော့မှာဘဲလေ။ အဓိကဆီးလမ်းကြောင်းမှာ မပိတ်စို့အောင်ကာကွယ်တဲ့အနေပေါ့။
ခုလိုလေး ……တင်ပြပေးလို. ..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်……
တညင်းသီးက ကောင်းကျိုးမပေးမှန်းသိပေမယ် ဒီလောက်ကြီးလို ့ထင်မထားဘူး
ဒညင်းသီး စားရတာ ကောင်းတာထက် ပါးစပ်က အနံ့ထွက်တာကို စိတ်ပျက်လို့ သိပ်မစားမိဘူး။
အိမ်သာ ဆေးရတာလည်း စိတ်ပျက်လှတယ်။
အိမ်က လူတွေကတော့ ကြိုက်ကြတာမို့.. ဆားများများ နဲ့ စိမ်ပြီး စားခိုင်းရမယ်။
ဒညင်းသီး စားဘူးတော့ ..
ငယ်ငယ်ကတည်းက မကြိုက်လို့ဘာ ..
ကြိုက်တဲ့လူဒွေကိုတော့ သတိပေးလိုက်ပါ့မယ်ချင့် ..
ထညင်းသီး ကို တအားကြိုက် ခဲ့တာ။
အဲဒီနောက် ပီကေ လဲ စွဲသွားတယ်။
အခုတော့ မစားတာကြာတော့ မြန်မာပြည်မှာတောင် မစားဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကျန်းမာရေး အတွက် ဗဟုသူတ လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဆီးသွားရင် အနံ ့ဆိုးတာကလွဲလို ့စားကောင်းပါ၏။